Okuqukethwe kwe-YouTube uMdali uCherry Wallis Ushintsha ku-DaVinci Resolve | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » Umhleli wokuqukethwe kwe-YouTube uCherry Wallis Ushintsha ku-DaVinci Resolve
Umhleli wokuqukethwe kwe-YouTube uCherry Wallis Ushintsha ku-DaVinci Resolve
I-Fremont, CA - Julayi 30, 2020 - I-Blackmagic Design namuhla umemezele ukuthi ubuntu be-YouTube nomdali uCherry Wallis manje usethembele kuDaVinci Resolve Studio ngazo zonke izici zokukhiqizwa kokuthunyelwe kusiteshi sakhe esinezihloko iHarry Potter Wizarding World.
Ngababhalisi abangaphezu kwesigamu sesigidi, iCherry iyisibalo esithandwa kakhulu kubalandeli be-franchise edumile. Kanye nomkhiqizi uChris Pearless, laba bobabili basukile ekubekeni ividiyo eyodwa ngeviki manje bakha ezintathu, kwesinye isikhathi ezine. "IDaVinci Resolve impela iyisihluthulelo salokho," kusho uCherry.
UChris uyanezela: “Uma kuziwa ekuthathweni kwezinqumo ngokuthi yibuphi ubuchwepheshe esibusebenzisayo ukuletha lo mbukiso, umbuzo wokuqala esihlala siwubuza ngothi; kuyasheshisa ukuhamba kwethu emsebenzini, futhi ingabe siyazidela ngekhwalithi? ”
Ngokusho kukaChris, ngendlela yabo yangaphambilini, bebehlala behamba phakathi kwezicelo. “Lokho kumoshe isikhathi esiningi kakhulu, kunikezela futhi kunikeze imigqa ngezikhathi lapho kudingeka ushintsho.
"Manje sesinayo le ndlela edidiyelwe eye yasivumela ukuthi siphule isikhunta sokuhlelwa komsebenzi okujwayelekile," kuqhubeka yena. "Amabanga angalungiswa kusengaphambili, futhi amamiksi angaqedwa kancane, bese ehlolwa ngenkathi kusesigaba sokuhlela."
Yize lokhu kungajwayelekile, uCherry noChris bakholelwa ukuthi kuyabavumela ukuthi bakhiqize okuqukethwe kwekhwalithi enhle ngejubane ebelingenakwenzeka phambilini. UCherry uyanezela, "Futhi hhayi nje kuphela ukuthi ukwanda kwekhwalithi nobungako bokukhiphayo kwethu kusho ukuthi sigcina ababukeli behlanganyela, kuphakamisa noma yiziphi izinzuzo zezezimali njengoba kunamathuba amaningi okusebenzisana nemikhiqizo, futhi bakhiqize imali eningi evela kuzikhangiso."
UChris uthi, “Ngiyathanda ukuthi iDaVinci Resolve inake imininingwane emincane. Noma ngabe lokho kungumdwebo obukhoma wama-waveforms alalelwayo nokuhlelwa kwe-animated ripple ngeziqondiso ezibukwayo, noma ukwazi ukubona izinketho zombala wesiqeshana kumamenyu wokuqukethwe kanye neminye imininingwane emincane engiqale ukuyithatha kalula. ”
Mhlawumbe inzuzo ebonakalayo ebonakalayo, kusho uChris, ukukwazi ukuthola amamaki aphezulu kakhulu. Uyachaza: “Yimaphi amanye ama-NLE angenawo amandla okuletha,” kuchaza yena. "Ngingaya ke kuthebhu yeFairlight ngidale ukuxubana komsindo okwakuyindlela yokukhetha ngaphambi kokufaka izicelo zomsindo ozimele."
Ngesikhathi sokuvalwa kwamuva nje, uChris noCherry basebenzise isikhathi esithile samahhala ukuqhubekisela phambili amakhono abo okuqamba ku-Fusion, okuholele ekutheni kube nevidiyo ephumelela kakhulu lapho uCherry efakwa kwizigcawu ezahlukahlukene ezivela kumamuvi weHarry Potter. Sele iqoqe ukubukwa okungaphezulu kwezigidi ezimbili!
"Ukuba namandla we-Fusion ngaphakathi kwesoftware yakho yokuhlela kuyinto engakholeki," kuphetha uChris. “Futhi eceleni kwamathebhu wombala neFairlight futhi! Ngikholwa ngempela ukuthi umlingo weqiniso weDaVinci Resolve ulele kulokhu kuhamba komsebenzi okubandakanya konke. Ukubuyela kunoma iyiphi enye i-NLE manje kuzwakala njengesinyathelo sokubuyela emuva esikhathini. ”
Izithombe zomkhiqizo we-DaVinci Resolve Studio nazo zonke ezinye I-Blackmagic Design imikhiqizo, iyatholakala ku www.blackmagicdesign.com/media/images.
Ngaphambilini: IZIMBANGELA ZE-FRAMETRUNK ZISUSA ISIKHALAZO SOKUGCINA EMVA KOKUVUNJELWA
Olandelayo: I-Bluefish444 ingeza ukusekelwa kwe-KRONOS K8 kwe-Foundry Nuke ne-Nuke Studio 12 eneWindows 2020.14.0 Faka Iphakheji